Soo-saaraha Golaha PCB - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Soo-saaraha PCB Assebmly - PCBFuture
kiniisadaha guddiga wareega daabacan, shirkii PCB noocooda, Soosaaraha shirkii PCB
PCBFuture waa soo saare urur PCB xirfadle ah. Our warshad waa soo-saarka PCB xirfad sare iyo khibrad iyo Adeegyada Golaha PCB ee Shiinaha. Waxaan ku siin karnaa adeegga furitaanka ka soo saarka PCB illaa isku-darka PCB, tijaabinta iyo guryaha.
PCBFuture waxay bixisaa isku imaatinka PCBA. Warshaddeena xirfadeed ee SMT waxay leedahay qalab horumarsan, sida daabacaadda stencil-ka heer caalami ah, soo qaadista SMT iyo meelaynta, dib u bixinta alxanka, tijaabinta internetka iyo soosaarida mesh birta ah. Tijaabada AOI iyo mashiinada baaritaanka raajada si loo baaro tayada.
Waa maxay nooc pcb-kulan?
Golaha noocyada daabacan ee nooca (PCB) waxay leeyihiin magacyo badan. Magacyada kale ee aad badanaa maqasho waa: teknoolojiyadda dusha sare (SMT) PCB noocyada ah, isku imaatinka noocyada PCBA, isku soo ururinta muunadda PCB, iwm. Kuwani waxay ka caawiyaan hubinta tayada, xaqiijinta in wax dhibaato ah ku jirin sheyga baaritaanka, helitaanka cayayaanka, iyo cusbooneysiinta naqshadeynta. Caadi ahaan, ka hor soosaarka ballaaran, hal mashruuc oo elektaroonig ah ayaa u baahan doona 2-3 soo noqnoqosho ah oo ah nooca PCB nooc ah si loo hubiyo in wax waliba ay si habboon u shaqeynayaan.
Maxaad ugu dooranaysaa PCBFuture mustaqbalka Been abuurka PCB iyo shirkii ?
Laba warshadood oo dhab ah oo ku yaal Shenzhen.
Qaybaha lagu kalsoonaan karo, kaliya ka imaado qeybiyeyaasha idman, tusaale, Falaarta, Qalabka korontada ee mustaqbalka, Digi-key, Mouser ...
Lamaane lagu kalsoonaan karo PCB, 15 sano PCB iskaashi, SGS ...
Nidaamka Golaha lagu kalsoonaan karo.
Adeegga One-stop, soo saaridda PCB, shirkii PCB, qayblibaaxna qayb ...
PCBFuture waxay taageertaa injineerada si ay si dhakhso leh isugu soo ururiyaan noocooda elektaroonig ah isla markaana ay si wax ku ool ah ugu kacaan inta lagu jiro geedi socodka xaqiijinta nashqadeynta oo dhan.
Adeegyadayada ugu muhiimsan ee loogu talagalay isu-imaatinka PCB
a. Wuxuu hubiyaa Jinka Alxan
b. Hubinta qaybaha ilaa 0201 "
c. Hubinta qaybaha maqan, dib-u-habeynta, qaybo qaldan, kala-goynta
X-Ray wuxuu bixiyaa baaritaanka qaraarka sare:
c. Xirmooyinka miisaanka Chip
d. Looxyada Bare
Mashiinka dhejiska elektiroonigga ah, PCBFuture wuxuu gaaraa tayada joogtada ah iyo xakamaynta nidaamka marka la isu keenayo looxyada wareegsan waxay leeyihiin lakabyo kala duwan oo dhul iyo xoog leh, isku xirayaal xilligan sarreeya, ama A-noocyada caadiga ah. Dhamaan AOIs waa la tijaabiyaa kahor QC.IPQC.
3. Dahaarka Rasmiga ah
Labis dhejis ah iyo daahan buufin toosan ayaa la heli karaa. Ilaalinta lakabka koronto-dhalinta aan tabinta lahayn ee lagu dhajiyay golaha guddiga wareegga daabacan si looga ilaaliyo shirarka elektaroonigga ah waxyeellada ay sabab u tahay faddaraynta, buufinta milixda, qoyaanka, fungus, boodhka iyo daxalka ay sababaan deegaanno adag ama daran. Ka dib markii la mariyo dahaadhka, waxaa si muuqata loo arki karaa inuu yahay qalab cad oo dhalaalaya.
PCBFuture dhammaan alaabooyinka waxay u hoggaansamaan heerarka IPC2. Iyadoo 18 sano oo waayo-aragnimo ah aan u dhigeyno BGA, UBGA, CSP iyo mawduucyo yar-yar oo muuqaal ah oo hoos u dhigaya kuna jiraan 0201, waxaan ku siineynaa qiimo-wax-ku-ool ah, wax-soo-saar sare oo shuruudaha SMT kasta ah.
5.Pin through-hole Golaha
Cabirka dhigista cajaladda iyo duubka duuban. Cabbirka ugu badan ee PCB waa 40 "x 40". Xawaaraha meelayntu wuxuu gaarayaa 15,000 gogo 'saacaddii, saxsanaantuna waxay gaadhaysaa 99%, taas oo yaraynaysa luminta qaybaha
Waxaa jira laba xalka PCBFuture. Nidaamka alxanka lahayn ee ka sameysan macdanta "lead" iyo "lead". Qol kasta oo xalka loo qaybiyaa 2 goobood oo madax banaan. Marka ma jiro wareer.
Xalka 'Boxed' dhameystiran oo ay ku jiraan maareynta maareynta dhamaan qeybaha, qeybaha korantada, balaastigga, casings iyo daabacaadda iyo qalabka baakadaha.
Maaddaama ay tahay shirkadda hoggaamineysa, PCBFuture waxay u socotaa inay qaado garba weyn mas'uuliyadda bulshada iyo hawlgalka, si buuxda uga qayb gasho tartanka caalamiga ah, oo ay ku dadaasho inay noqoto soo saaraha heerka caalami ee PCB.